Fukushima amanzi decontamination system phansi - Izindaba Rule
Fukushima amanzi decontamination system phansi
isiZulu: Enye yezinto izithombe ezithathwe Fukushima I Nuclear Power Plant tour lixhaswe ngezimali yi-Tokyo Electric Power Company ngoJuni 23, 1999. Japanese: Ngesikhathi tour exhasiwe-Ikhamphani Tokyo Electric Power ezenzeka esikhathini okokuqala amandla enuzi in June 1999 Fukushima (Photo credit: Wikipedia)
I-opharetha of Japan sika nezilima Fukushima enuzi uthe ngoLwesibili kwakuthiwe lokuchitha ikhi decontamination system esetshenziswa amanzi ahlanzekile ngemisebe okwathatha isikhathi eside-engamaphepha engcoliswe, sekusele amahora ambalwa nje ngemva kokuba emuva ku-inthanethi.
Tokyo Electric Power (TEPCO) switched off Advanced Liquid Icubungula yayo System (Alps) ngemva izisebenzi zathola ukuvuza “seeping” kusukela ithangi ngoMsombuluko.
Mayelana eziyisishiyagalombili amalitha (2.1 amalitha) amanzi angcolile kunenkolelo yokuthi leaked out, umkhulumeli wale nkampani yathi. Wanezela kwakungekho ngokushesha ukuphepha ingozi njengoba amanzi utholiwe.
Ukumiswa weza amahora ayisithupha ukuze nje emva opharetha asengozini switched emuva ezimbili ezintathu imigqa in ohlelweni, okuyinto uyawathena amanzi ngemisebe okwathatha isikhathi eside-engamaphepha engcoliswe usetshenziselwa ukupholisa kulesi sikhungo kabana eJapane yaba mibi kakhulu 2011 kuzamazame umhlaba-tsunami inhlekelele.
Lonke uhlelo lase zivalilwe ngoLwesithathu olwedlule ngemuva TEPCO wathola ukwephuka. I eqinile ngokuphindiwe switched off uhlelo phezu yochungechunge oluthile lwezinto ezenzeke glitches kusukela kwecala imisebenzi kwaqala ngonyaka edlule.
TEPCO kunzima ukusingatha elikhulu — futhi iyakhula — umthamo we amanzi angcolile at Fukushima ngemva kokuzamazama komhlaba-tsunami, okuyinto ebangele lesi esibi kunazo obumbi yama-athomu e isizukulwane kanye oniselwa abanye 18,000 izisulu.
magagasi asabekayo yaphahlazeka simila, isusa ophendulayo meltdowns ukuqhuma. Ukuhlanza up site niphihlizwe nibe kulindeleke ukuba kungathatha amashumi eminyaka.
Kunamabandla angaba ngu- 436,000 cubic metres amanzi angcolile egcinwe at the site cishe ngo 1,200 Amathangi injongo-wakha.
Ochwepheshe abaningi bathi esikhathini esithile abaseGibithe bayakunengwa ngukuphuza amanzi kufanele adedelwe bengena olwandle belandela ama kokuba scrubbed we ezingcolisa eyingozi kunazo.
Bathi kuyoba ingozi azinakwa ekuphileni zasolwandle noma abantu, kodwa abadobi bendawo kanye namazwe angomakhelwane kuthiwa ubesebenzisa indluzula engafuni bamelana.
Lesi sihloko, Fukushima amanzi decontamination system phansi, is yedlanzana kusukela AFP futhi posted lapha nge imvume. Imininingwane 2014 AFP. Wonke Amalungelo Agodliwe
20741	0 Fukushima, Japan, Isikhungo sokuphehla amandla enuzi, Tokyo Electric Power Company
← Royal Mail ukusika 1,600 imisebenzi MH370 search emuva ku action kokuqala kwezomthetho iqala →